Howlgal ka dhan ah Soomaalida oo ka bilaawday Koonfur Afrika | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Howlgal ka dhan ah Soomaalida oo ka bilaawday Koonfur Afrika
Ciidamo ka tirsan Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ay bilaabeen howlgallo lagu qab qabanayo dad ay soomaali ku jiraan gaar ahaan kuwa aan Sharciga heysan ee ku nool dalkaasi Koonfur Afrika.
Ciidamada ayaa sigaar ah waxaa ay howlgallada ka dhanka ah Soomaalida uga sameeyeen Xaafada ay Soomaalida ku badan tahay ee Bellville Magaalada Cape Town,waxaana la sheegay in howlgalkaas lagu qabtay Dhalinyaro farabadan oo aan heysan Sharciga dalkaasi Koonfur Afrika.
Goobha ay Ciidamada Booliska Koonfur Afrika howlgallada ka sameeyeen ayaa waxaa kamid ah goobaha Ganacsiga Soomaalida,sida Dukaamada Dharka,kuwa lagu Iibiyo Alaabaha kala duwan,waxaana dadka la xirey ku jira Milkiilayaasha goobaha Ganacsi.
Dadka la xirey ayaa waxaa ay isugu jiraan Soomaali iyo Itoobiyaan,waxaana Saraakiisha Ciidamada Booliska Koonfur Afrika ay Warbaahinta dalkaas u sheegeen in dadka aan Sharciga heysan la siinayo Warqado u fududeynaya inay helaan Sharci.
Saraakiisha Ciidamada Booliska Koonfur Afrika ayaa waxaa digniin kama dambeys ah ay siiyeen Milkiilayaasha Hoteelada, iyagoo uga digay in qof aan sharci wadan ay ka kireeyaan Hoteeladooda.